काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको आँकडा अनुसार अहिले करिब ३१६७ मेगावाटका १४१ जलविद्युत तथा सोलार आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती मध्ये ५७.८ मेगावाटका १० सोलार आयोजना छन् । जलविद्युतको तुलनामा सोलारको निर्माण लागत आधाभन्दा बढीले कम हुन्छ । पछिल्लो समय जलविद्युतको प्रतिम...
काठमाडौं । अत्तरिया–बलाँच (दार्चुला) १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दोस्रो सर्किट तान्ने क्रममा डडेल्धुराको पोखरामा लामो समयदेखि स्थानीयबासीका कारण काम रोकिएको छ । पर्याप्त मुआब्जा नपाएको, अधिग्रहणको दायराभित्र प्रभावितको जग्गा नपारिएको जस्ता कारण देखाएर काम अगाडि बढ्न दिइएको छैन । उक्त प्रस...
२०७८ फाल्गुण २६
काठमाडाैं । नेपालले ठूलो बहस र चर्चाबीच हस्ताक्षर भएको साढे ४ वर्षपछि अन्ततः गत फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्यो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको अनुदान सहयोगमा निर्मा...
कालोसूचीको ठेकेदारकाे पक्षमा प्राधिकरण, ‘वारेन्टी पिरियड’भित्रका ट्रान्सफर्मर आफ्नै खर्चमा मर्मत गरिँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ४ वर्ष अगाडि खरिद गरेका ३डी कोर ट्रान्सफर्मर ठेकेदारको दायित्व रहेकै समय (वारेन्टी पिरियड) भित्र आफ्नै खर्चमा धमाधम मर्मत गरिरहेको पत्ता लागेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट बिग्रेर लैनचौर मर्मत केन्द्रमा आएका ट्रान्सफर्मर कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनमा मर्म...
१२ वर्ष बित्यो तर अझै बल्दैन बिजुली, सर्वसाधारणले कहिले पाउने प्रतिफल ?
२०७८ माघ २८
काठमाडौं । दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजना काम सुरु भएको १२ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजना एउटा परिवारवादको शिकार हुन पुगेको छ । कम्पनीमा एकाघरका परिवार मुख्य लगानीकर्ता रहनु, लगा...
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला केही वर्षयता गर्दै आएको वित्तीय सुधार, आम्दानी, नाफा तथा विद्युत महसुल असुली जस्ता गतिविधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको र महालेखाको विवरणमा फरक परेको तथा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो । महाल...
निजी जलविद्युतमा कमजोर सुशासन र अपारदर्शी भित्री खेल, सुखद देखिँदैन भविष्य !
काठमाडौं । गत जेठ ६ गते परीक्षणका क्रममा ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको डिसेन्डिङ बेसिन (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) भत्कियो । लिखु खोलामा बाढी आएका कारण बाढी पसेर भत्किएको आयोजनाको तर्क छ । यस विषयमा विद्युत् विकास विभागले अध्ययन तथा छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि बाढीका कारण पटक&ndash...
सरकारले अध्ययन गरेका ५ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिन प्रतिस्पर्धा गराइँदै
काठमाडौं । सरकारले अध्ययन गरेका ५ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरी प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । करिब १७० मेगावाटका यी आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरेको छ । प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजनाहरूमा ४७ मेगावाटको दूध...
स्वदेशी विद्युतगृहको हिउँदे उत्पादनको अवस्था दयनीय, माग धान्न सधैं भारतको भर
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् जडित क्षमता १४१८ मेगावाट पुगेको छ । यसमध्ये प्राधिकरणको ६४६ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ७७२ मेगावाट देखिन्छ । प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रको जडित क्षमता ७४२.४४५ मेगावाट छ । तर, केही समय यता २२ मेगावाटको चाकु...
जलविद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशी खपत र विदेश बेचेर धनी हुने सपना नेपालसँग छ तर जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था हेर्दा हिमालमा हिउँ पग्लेर र पहाडमा मुहान खडेरी बढेर पानीको सतह र बहावमा कम भई विद्युत् उत्पादन क्षमता नै घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ । काठमाडाैं । ११० वर्षअघि बनेको ५ सय किलोवाटको फर्पिङ ज...